ओमकार टाइम्स शिक्षण अस्पतालको क्याविन ६०१ मा प्रधानमन्त्री ओली, सुरक्षा व्यवस्था कडा – OMKARTIMES
शिक्षण अस्पतालको क्याविन ६०१ मा प्रधानमन्त्री ओली, सुरक्षा व्यवस्था कडा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भोलि (बुधबार) दोस्रो पटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण हुने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली हिजो (सोमबार) साँझ अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
ओली अस्पतालको एनएक्स–२ को क्याविन ६०१ मा भर्ना भएका छन् । उनलाई भान्जी संग्रौला ज्ञवालीले मृगौला दिन लागेकी हुन् ।
डा. प्रेम ज्ञवाली नेतृत्वको चिकित्सकको टोलीले भोलि (बुधवार) ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दैछ ।
ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणमा शिक्षण अस्पतालको नेफ्रोलोजी विभागकी प्रमुख प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले समन्वय गरेकी छन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको निजी चिकित्सक हुन् ।
प्रत्यारोपणका लागि शल्यचिकित्सकको भूमिकामा शिक्षण अस्पतालको युरोलोजी विभागका विभागी प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा. उत्तरम शर्मा रहनेछन् । युरोलोजी विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवाली पनि संलग्न रहेका छन् ।
शल्यक्रियामा नेफ्रोलोजी विभागका डा. महेश सिग्देल, डा. मुकुन्द काफ्ले र डा. पवन चालिसे, डा. सुमन चापागाईं, डा. सुजित पौडेल, डा. महेश प्रधानलगायतका चिकित्सक संलग्न हुने अस्पतालले जनाएको छ ।
सन् २००८ अर्थात २०६४ मा पहिलोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले १३ वर्षपछि पुनः दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बस्ने त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि विभिन्न व्यक्तिले उनलाई सफल शल्यक्रिया र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेका छन् ।
यसैबीच हिजै सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणमा सफलता र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।
यता उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै पुगेर सफल शल्यक्रिया र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे ।
मृगौला प्रत्यारोपणपछि ओलीले केही दिन अस्पतालमै आराम गर्नेछन् ।
यता प्रधानमन्त्री ओली हिजो सोमबार अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा अगाडी राष्ट्र र देशवासीको नाममा भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफू मृगौला प्रत्यारोपण गरेर चाँडै स्वस्थ भई नियमित काममा फर्कने बताएका छन् ।
उनले जसरी खेलको बीचमा ‘बेष्ट स्टाइकर’ले मैदान छोड्दैन, त्यसैगरी हाम्रा भर्खर जागृत हुँदै गरेका सपनालाई बीचमा अलपत्र पारेर आफू अलपत्र नहुने बताएका छन् ।
‘मेरो सिङ्गो जीवन कुनै न कुनै किसिमको संर्घषमा बित्दै आएको छ, विविध समस्याहरूसँग निरन्तर जुध्ने क्रममा शरीरभित्र सिर्जित रोगसँग लड्न म बाध्य हुन पुगेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ’, प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भनेका छन्, ‘आजभन्दा झण्डै १२ वर्ष अघि मेरा दुबै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि २०६४ साउनमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएको थिएँ । त्यतिबेला नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सुविधा थिएन । आगामी फागुन २१ गते बुधबार फेरि मैले मृगौला प्रत्यारोपण गराउँदैछु । त्यसको चिकित्सकीय तयारीका लागि म आजै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्मा भर्ना हुदैछु ।’
उनले अगाडी भनेका छन्–‘भनिन्छ, आशाको दियो बलिरह्यो भने शान्ति, प्रेम र विश्वासको जग मजवुत तुल्याउन सकिन्छ। कुनै समय मुर्छित रहेका हाम्रा सपनालाई हामी सबै मिलेर जगायौं। त्यसलाई ब्यूँताउनका लागि गत निर्वाचनमा मेरो नेतृत्वको वरीपरी तपाईहरू सबैले आफूलाई उभ्याउनु भयो । यस वर्षलाई हामीले समृद्धिको आरम्भ वर्ष भनेका छौं। जसरी खेलको बीचमा ‘बेष्ट स्टाइकर’ले मैदान छोड्दैन, त्यसैगरी हाम्रा भर्खर जागृत हुँदै गरेका सपनालाई बीचमा अलपत्र पारेर म पनि अलप हुन्न ।’
‘संसारमा कोही पनि अजम्बरी छैन। मेरो यो संकल्प पनि अजम्बरी बन्न हैन, हाम्रा जागृत हुँदै गरेका सपनालाई साकार पार्नका लागि हो भन्ने यहाँहरुले बुझ्नु नै भएको छ। म पुनः एकपटक आग्रह गर्दछु, मेरो स्वास्थ्यलाई लिएर यहाँहरू ढुक्क रहनुहोस् ।’